Tag: site comments | Martech Zone
Ekwetaghị m? Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-enweta site na nkọwa? Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-enweta n'aka ndị ahụ na-aza ajụjụ? Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-enweta site na ndị na-ekwu okwu na mgbasa ozi mgbasa ozi gị? Ikekwe ọ dịghị. Njikọ aka, dịka e si atụle ya ma ọ bụ itinye aka, bụ ihe nzuzu maka imirikiti azụmaahịa. Ọtụtụ ndị ọkachamara ga-ekwupụta usoro egwu ndị a, na-ekwu na ha ga-eduga n'ụzọ ụfọdụ na ntinye ego, dị ka ịdọpụta a